व्यक्तिगत घटना दर्ता नहुँदा न्याय र अधिकारबाट बन्चित |
व्यक्तिगत घटना दर्ता नहुँदा न्याय र अधिकारबाट बन्चित
प्रकाशित मिति :2016-08-22 10:38:00
सिराह । आफैँले मन पराएर रोजेर विहे गरेको श्रीमानले धरधरी रुवाउला भनेर कसले पो सोचेको हुन्छ र ? सँगै जिउन, सँगै मर्ने, बाचा कसम खाएको श्रीमानले जिन्दगी भरी यसरी नै खुशी देला भन्ने आशा र भरोसाले चन्देश्वरी ढुक्क थिईन् । जिन्दगी रमाइलो थियो ।
एक दिन अचानक छिमेकीको घरमा भोज खान जान्छु भनेर गएका श्रीमान् त्यसपछि कहिल्यै फर्केनन् । बेपत्ता भएको बाह्र वर्ष बित्यो, चन्डेश्वरीका श्रीमानको अझै अत्तो पत्तो छैन ।
श्रीमानले चन्डेश्वरीलाई न त विवाह दर्ता गरिदिए न त नागरिकता नै बनाई दिए । ‘त्यतिबेला मलाई छोडेर कहाँ जाला र ? विवाह दर्ता गरिदिई हाल्छ भन्ने लाग्यो , अहिले छोरालाई स्कुलले जन्म दर्ता प्रमाणपत्रविना भर्ना गर्दिन भनेर मलाई पटक पटक भन्छ, मैले कसरी छोरा छोरीको जन्म दर्ता गर्ने’ उनले भनिन् ।
विवाह दर्ता र नागरिकताका लागि उनी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महिला बालबालिका कार्यालय धेरै पटक धाईन् । तर जहाँ गए पनि श्रीमान् लिएर आउ भन्ने जवाफमात्रै आउँछ । उनी भन्छिन् ‘श्रीमान् बेपत्ता छन्, कहाँबाट ल्याउनु, ? मेरो त जिन्दगी यसै गयो छोराले समेत जन्म दर्ता नभएका कारण पढ्न नपाउने भयो ।’
चन्डेश्वरीलाई अहिले अल्सरले थल्याएको छ । १२ वर्षीया छोरी कहिले साहुको घरमा त कहिले स्कुलमा भाँडा माझ्ने काम गर्छिन् । नौ वर्षीय छोरा २ कक्षामा पढ्छन् । चन्डेश्वरीलाई बेथाले च्यापीरहन्छ । शरीरमा केही आराम भए उनी सकी नसकी होटलमा काम गर्छिन् । उनलाई हप्तै पिच्छे औषधी गर्नुपर्छ ।
चन्डेश्वरीमात्र होईन सिरहाको नहरा निरौलकी लिला देबी शाहको पनि विवाह भएको १८ वर्ष भयो । तर विवाह दर्ता र नागरिकता दुवै छैन । विवाह भएपछि लिला देबीलाई उनको श्रीमानले सँधै कुटपीट गर्ने खान नदिने घरबाट निकाल्ने गर्थे । पछि त उनले अर्को विवाह गरे । दुईवर्ष अघि श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरेपछि लिला देबी शाहले अदालतमा बहुविवाह र माना चामलको मुद्दा हालिन् । अदालतले उनको पक्षमा अहिले फैसला ग¥यो । उनले पटक पटक नागरिकता र विवाह दर्ताका लागि आग्रह गरिन् । तर उनका श्रीमान् र परिवारले अंश दिनुपर्छ भन्दै नागरिकता बनाई दिएनन् ।
विवाह दर्ता गर्न श्रीमान् श्रीमती दुबै हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर श्रीमान् र परिवारले महिलाले सम्पत्तिमाथि अधिकार खोज्ने डरले विवाह दर्ता र नागरिकता जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन आलटाल गर्छन् । एकातिर झन्झटिलो कानुनी प्रकृयाका कारण सबै व्यक्तिगत घटना दर्ता हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर नागरिक सचेत नभएकाले पनि यो संख्या कम देखिन्छ ।
नगारिककै कमजोरीले व्यक्तिगत घटना दर्ता नभएको दोष देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिदै सिरहा क्षेत्र नम्बर दुई नेकपा एमालेका सांसद राम चन्द्र यादवले विवाह भएको १८ वर्षसम्म नागरिकता किन नबनाएको भन्दै उल्टै महिलालाई प्रश्न गरे । तर व्यक्तिगत घटना दर्ता नभएर न्याय पाउन नसकेका महिलालाई सहयोग गर्न आफू सँधै तयार रहेको वचन पनि उनले दिए । उनले नागरिकलाई समयमै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न समेत आग्रह गरे ।
सिरहामा व्यक्तिगत घटना दर्ता अत्यन्तै कम हुने गरेको जिल्ला बिकास समिति पन्जीकरण शाखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । करिब ७ लाख जनसंख्या भएको सिरहा जिल्लामा १५ हजार ६० जनाकोमात्र जन्म दर्ता गएको आर्थिक वर्षमा भएको छ ।
पुरुष भन्दा महिलाको जनसंख्या बढी भएको सिरहा जिल्लामा पुरुषको तुलनामा महिलाका व्यक्तिगत घटना दर्ता कम भएको तथ्ङ्याकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सिरहामा आठ हजार चार सय ४३ जना पुरुषको जन्म दर्ता भएपनि महिलाको ६ हजार चार सय १७ जनाको मात्र भएको छ । त्यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई हजार तीन सय ९७ जनाको मृत्यु दर्ता भएकोमा एक हजार चार सय ४७ जना पुरुषको मृत्यु दर्ता भएको छ भने नौ सय ५० जनामात्र महिलाको मृत्यु दर्ता भएको छ ।
त्यस्तै दुई हजार सात सय एक जना महिला, पुरुषले विवाह दर्ता गरेका छन् । सिरहा जिल्ला अदालतको तथ्ङ्याकले सम्बन्ध बिच्छेदका ६४ वटा मुद्दा फस्र्यौट गरेको तथ्ङ्याक छ । तर आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सम्बन्ध विच्छेदका एउटा पनि घटना गाबिस, नगरपालिकामा दर्ता भएर नआएको जिल्ला विकासको पन्जीकरणले देखाउँछ ।
नागरिकलाई व्यक्तिगत घटना दर्ताबारे सचेत गराउन नसकेको स्वीकार्दै सिरहाका स्थानीय विकास अधिकारी टुबराज पोखे्रलले आगामी दिनमा यसलाई समुदायसम्म सघन रुपमा लैजाने बताए ।
व्यक्तिगत घटना दर्ता नहुँदा हुने समस्या समेत आफूले अहिलेमात्र महसुस गरेको भन्दै यसलाई अभियानका रुपमा लाने पोख्रेलले बताए । उनले आगामी दिनमा व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि गाविस नगरपालिकामा शिविर संचालन गर्ने जस्तो योजना लान गाविस सचिवलाई निर्देशन दिए ।
व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन जाने नागरिकलाई सम्बन्धित निकायका कर्मचारीले सहजीकरण नगरेकाले पनि घटना दर्तामा कमी आएको महिला अधिकारकर्मी देबकुमारी महरा बताउँछिन् । कर्मचारीले घटना दर्तामा समेत पैसा लिने गरेकाले पनि गरिब बिपन्न ,समुदायका नागरिक व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न नजाने गरेको महराले बताईन् ।
नागरिक अगुवा राजेन्द्र चौधरीले बालबालिकाको नियमित खोप लिन अनिवार्य जन्म दर्र्ता हुनुपर्ने नियम ल्याउन सुझाव दिए । अधिकारकर्मी बिनोद बिसुन्केले सामाजिक अभियानका रुपमा सरोकारवाला सबैपक्ष लाग्नु पर्ने बताए ।